Ngaphansi izindleko zokuphila okufanele aqondwe kubhasikidi umthengi, okuyinto ngempela kuhlanganisa imikhiqizo ezidingekayo nokudla non-ukudla, izinhlobo ezahlukene izinsiza, kanye ukukhokha intela. Ngakho, it is a eyamsiza impilo yezakhamuzi futhi ukuphila kwabo kwesikhathi egcwele. Kumiswa ubuncane ukudla is kusukela ukuqhutshwa umndeni wakhe. Iziphi izinzuzo ifakwa imikhaya ehola kancane nendlela ukuhlela kwabo? Le mibuzo kanye neminye izophendulwa esihlokweni, ngoba ingxenye uhlobo impahla ekukhokheni isimo bebheke abampofu zenziwa njalo.
Yini kubhekwe umndeni engenayo ephansi?
Ekuqaleni, kufanele kuphawulwe ukuthi ezingeni lengenako engenayo - ukhiye, kodwa hhayi kuphela inkomba esetshenziswa ukukhomba abantu, impela edinga ukusekelwa ngokwezimali nezinye kusuka kuhulumeni. By the way, kuba isimo oyisibopho abantu abalindele ngaphansi kwazo usizo lomphakathi, ukwakha muzi futhi bahlale ngayo ndawonye.
Ubani okufanele lapha ukuze afeze futhi iziphi izinzuzo ifakwa imikhaya ehola kancane eMoscow nesifunda eMoscow? Okudidayo ukuthi, ngo-2016 e-inqubo ukuphendula lo mbuzo ngokuthi angiyekanga umphakathi yiluphi ulwazi olusha, ngokulandelana, akazange kumethuse. Njengoba nje ngaphambili, umndeni wawusho ukuhlala ndawonye ukwakha ezivamile yasendlini womshado (izingane nabazali, ushiya-indodakazi (zokutholwa) nosingamama nobaba, abazali abakuthola futhi kuyenze, bazalwane, njalo njalo). By the way, ngokuhambisana nomthetho, ilungelo igunya ukuthola ukuxhaswa okuvela embusweni kukhona imindeni emikhulu futhi akuphelele, kanye nalabo ezihlala abanokukhubazeka noma izakhamuzi esezikhulile.
Naphezu kwakho konke lokhu, lo mbhangqwana akanazo izingane, noma omunye umzali, umzali ingane yakhe siqu, uma ngiphoqelekile ngempela, futhi, ungahambisa Ephepheni usizo lomphakathi. Kuyadingeka ukwengeza ukuthi abampofu kuphela labo imindeni abangekho esimweni esinzima ngokwezimali. Ngaphezu kwalokho, izimo abafanele akufanele nganoma iyiphi indlela ancike kuzo. Yingakho abampofu ayikwazi kubhekwe umndeni eziqukethe izimuncagazi abazali uyaqaphela noma uphuzo oludakayo abasekeli.
usizo State kokuba uhlamvu kwezenhlalo kanye ngezigaba zayo
Kuyini sibili okumele imikhaya ehola kancane? Ekuqaleni, kufanele kuphawulwe ukuthi izinyathelo ukusekela iholo eliphansi labantu abazenzi kokubili ezingeni yombuso kanye ezindaweni. Ngokwesibonelo, usizo isimo, okuhloswe ngazo imikhaya ehola kancane, kwenziwe ngokuhambisana lezi zinhlobo ezilandelayo:
Isinxephezelo nezinzuzo imvelo yemali.
Siza uhlamvu yemvelo: izicathulo, izingubo, ukudla, imithi, uphethiloli kanye nezinye izidingo.
uxhaso Ukwandiswa ukukhokhwa amasevisi Umbuso indawo yomphakathi, ezinye izinzuzo ngokuya izintela, kanye ilungelo ukukhulula iseluleko sezomthetho.
sizoxoxa ngokuningiliziwe ngokuba ukuqonda ngokuphelele amaphuzu idatha kufanelekile.
Yini izinkokhelo ifakwa imikhaya ehola kancane? Kubalulekile ukwazi ukuthi izinzuzo maqondana imikhaya ehola kancane, njengoba umthetho, amiswa ngokuhambisana letingemasayizi lahlukene. Lokhu kuncike Russian Federation futhi izinzuzo eziye yakhokhwa ngasekuqaleni ngokuyinhloko. Ikakhulukazi, imikhaya ehola kancane eMoscow bangalindela ngokuphepha uhulumeni ukuthi anikezele nesondlo njalo ngenyanga. Ngaphezu kwalokho, ubukhulu semali okumele ikhokhwe kunqunywa ikhumbula indlela yokwakheka umndeni eminyakeni yobudala yomntwana. Lokho ukubeka emindenini lephuyile eMoscow nengane eyodwa? Kufanele kuqashelwe ukuthi inzuzo esiphezulu iqondiswa izingane ezineminyaka engu-1.5 kuya kwemithathu, wakhulela enomzali oyedwa engenayo ephansi. Ngakho, ngo-2016 esiphezulu sabhalwa ngqo Moscow - 4500 RUR. ngenyanga.
Lokho bonke ...
Iziphi izinzuzo ifakwa ukuze yemikhaya ehluphekayo esifundeni Moscow? Ngaphezu kulabo abahlobene amathuluzi ukwesekwa bemvelo kwezenhlalo, njengoba e Moscow, njengoba kwezinye izifunda eyaziwa umkhuba jikelele isimo sokungakhethi kwesikhwama uchungechunge ukukhokhelwa target. Ngokwesibonelo, esikoleni onyakeni omusha zesikolo, noma ukunikeza ukudla lokuchibiyela ukuze nabancelisayo, abesifazane abakhulelwe.
By the way, abafundi eyinhloko futhi secondary education amakhono kanye abafundi imfundo ephakeme ababezalelwe imikhaya ehola kancane, noma kunjalo, inikezwa ekunikezweni isimo bemvelo nomphakathi.
Izinkokhelo ngomntwana wesithathu
Iziphi izinzuzo ifakwa imikhaya ehola kancane eRussia? Kuyafaneleka udvwebela nyangazonke angabonelela ingane yesithathu kuze kube iminyaka emithathu, yebo, ku-izingane okwalandela. By endleleni, lokhu inzuzo sihlobene kuphela izingane abazalwa ngemva 2012. Ngaphezu kwalokho, imfuneko kuleli cala lingaphansi kunalokhu sokuqhubeka ezingeni, imali umndeni lengenako.
Izinzuzo izingane ukungezwa
Kuyini sibili okumele imikhaya ehola kancane? Ebalulekile ukusekelwa isimo ukuthi kungenzeka kwebantfwana labavela emindenini lephuyile ukwenza aphume mncintiswano kokubili umphakathi kanye amanyuvesi kwangasese. Kulokhu, kuphoqelekile ukuba athobele kwale mibandela elandelayo:
Umndeni abaswele uhlala umzali oyedwa kuphela onokukhubazeka hhayi ngaphansana iqembu lokuqala.
abafundi Abazama abavela emindenini enemali engenayo ephansi kungazange kufinyelele eminyakeni engamashumi amabili.
umfundi Abazama uye babhekana ngokuphumelelayo nokuphazamiseka uvivinyo emnyango, lapho kukora ekuqaleni iphuzu isethi (ngokuhambisana ukuhlolwa noma emnyango izivivinyo).
Lokho ukubeka emindenini lephuyile eMoscow? Ngaphezu la maphuzu, uhlelo lwemvelo yezenhlalakahle ukusekela abampofu futhi liqukethe uhlobo social service ukunikeza izingane sanatoriums futhi dispensaries ehlukahlukene (Yiqiniso, nge zezempilo ezifanele). Kubalulekile ukuze ungeze ukuthi le ngxenye isevisi isimo inikezwe ngonyaka.
Kuyini sibili okumele imikhaya ehola kancane? Uma umndeni efana nalena ehambisana nomthetho abadinga izindlu, ke unelungelo emgqeni ngoba ifulethi abampofu, khona-ke isimo niyophiwa izindlu khulula ngokuhambisana inkontileka social umsebenzi. Lolu hlobo iziqinisekiso ziyabhekelelwa Ikhodi Ezezindlu. Kuyini sibili okumele imikhaya ehola kancane eRussia? Ngaphezu kwalezi amakhono, imikhaya ehola kancane Ungathenga indlu kuzimo mortgage bemvelo nomphakathi. Ngakho, ngokungafani kuya commercial imithetho indlu, le ndlela kusho abanye izinzuzo maqondana ukubaluleka impahla. Ngaphezu kwalokho, kule ndaba, isimo enikeziwe iziqinisekiso ezengeziwe bemvelo nomphakathi.
Zentela kanye nemixhaso kwezindlu kanye nezinsiza ohlanganyelwe
Njengoba kuphawulwe ngenhla, ngokuphelele yonke imikhaya ehola kancane unelungelo ukuba bazuze ukusekelwa isimo ukukhokhwa efulethini, kanye izindlu kanye nezinsizakalo zomphakathi. Kubalulekile ukuze ungeze ukuthi izibonelelo ezifanele anikezwa abanikazi nje kuphela kodwa futhi nabaqashi. isikhathi sawo sokuba ilingana nezinyanga eziyisithupha.
Ngaphezu uxhaso, usizo ukuze imikhaya ehola kancane kusukela state futhi ngokuya ubanika zentela. Ngokwesibonelo, kusukela kwentela engenayo abantu kukhona sokuthola eyisamba uhlamvu (kuhlanganise usizo nge uhlobo impahla), ekhokhwa ukuba izakhamuzi engenayo ephansi njengoba usizo ezihlosiwe orientation nomphakathi.
Kanjani ukuze uthole ukwesekwa zomphakathi ezivela isimo?
Kwabe sekuvela ukuthi, izinkokhelo emindenini lephuyile eMoscow nje iyanithobela isabelo esemthethweni isimo umndeni abaswele. Ukuze wenze lokhu, kumele ufake isicelo kusiphathimandla esifanele ezingeni lesifunda. Ngakho, udinga ukunikeza lezi zincwadi ezilandelayo ngempumelelo ukuqedela le nqubo:
Isitatimende phikisana isabelo isimo umndeni abaswele, ngokubhala.
amalungu omkhaya amadala passport.
Ubufakazi ukubukeka abantwana abazalwa.
Ubufakazi isekela umshado isiphetho phakathi kwabashadile.
Kuvele isitatimende engenayo (kumelwe kwenziwe efomini elifanele).
Siza ngqo ku Ukwakheka umndeni (kungase kuthathelwe indawo sicashunwa indlu).
Siza, ahlotshiswe Employment Centre, kanye nomlando umsebenzi, uma kunesidingo.
Passbook noma ikhadi lasebhange.
Kufanele kuqashelwe ukuthi inani elikhulu izifunda imikhaya ehola kancane esifundeni eMoscow nethuba ukudweba izinzuzo ngesilinganiso ephakeme (ikakhulukazi uma kuziwa izibonelelo zezingane). Ngokushesha ungase izimo kulo msebenzi kumele ahlinzekwe SSA yesifunda okuhambisanayo.
Ekunikezeni kwemibhalo engenhla emzimbeni efanele kufanele sikhumbule ukuthi amalungu enamandla omkhaya Usufike yobudala, noma kunjalo, kufanele baqashwe noma ibhaliswe I-abangasebenzi. Kulokhu, ngaphandle kuba abesifazane abasebunzimeni ikhefu ngoba ekunakekeleni ingane. By endleleni, uma esihlalweni amanye amalungu omkhaya awazi, kuyoba isithiyo cishe ukulwelapha ukuhanjiswa imibhalo maqondana imali yabo. Ukuze kuxazululwe le nkinga kungenzeka kuphela esebenzisa izinyathelo zomthetho ezihlola ulahlekile amalungu omndeni yangaphakathi izindaba emizimbeni.
Ekuphetheni, kufanele kuphawulwe ukuthi kunoma yisiphi isimo kumelwe kukhunjulwe ukuthi le mibhalo, kanye nanoma yimuphi omunye efanele ngesikhathi kuphela isikhathi esithile. Ngakho-ke okungalungile ukudweba ekubhekaneni nesimo imikhaya ehola kancane uyephuza yezikhalazo uMnyango wezeNhlalakahle. Kungenjalo kunobungozi ukuthi imibhalo ngeke zisaba evumelekile. Khona-ke kubalulekile ukuqoqa wonke amaphepha emzuliswaneni wesibili. Qaphela ukuthi ithuluzi ngayine inezidingo zayo usuku lokuphelelwa isikhathi yayo.
Yiyo yonke imininingwane eyisisekelo ukuthi kuyadingeka ukuze imikhaya ehola kancane eRussia futhi kanjani it.
Imithetho Yokuphepha Emlilweni yabantwana besikolo saseRussia
Ukondla obushade naye emuva kwesehlukaniso izibopho lokusekelwa amanye amalungu omndeni. Umuntu kumelwe ukhokhe nesondlo?
New ushwele intela eRussia
Iyini inqubo ukukhethwa uMongameli Russian Federation
Sikhetha - sase fleeced. Thina wahlulele umuntu ngezenzo zabo
Yini flooring ukukhetha: amathiphu kanye nokubuyekeza. Cork flooring. vinyl ezinengilazi
Aachen Cathedral Germany: umlando, incazelo, isithombe
Inqubomgomo Anti-nokukhuphuka kwamanani ezimpahla isimo: amafomu nezindlela yokuqhuba
I wendlala ndlala - wesilisa
Yentela yemali engenayo emholweni kanye nezimali ezibanjwayo eziyisisekelo kusukela 2012
Izinhlobo ezinkulu lomholo